Lamina vaovao manerantany momba ny fampitam-baovao an’i Shina: Tafatafa niarahana tamin’i Cédric Alviani avy amin’ny RSFAzia Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2019 5:52 GMT
Hatramin'ny nametrahan'i Xi Jinping ny tenany ho mpitondra tsy azo iadian-kevitra ao Shina tamin'ny taona 2013, nanjary iray amin'ireo laharam-pahamehan'ny governemanta shinoa ny andraikitry ny haino aman-jery manerantany amin'ny famerenana indray ny endrik'i Shina. Ankehitriny dia nahavita nahasarika mpanao gazety sy fampahalalam-baovao maro manerana izao tontolo izao izay matetika mazoto noho ny fandrisihana ara-bola sy/na fiarahamientana ara-potokevitra ny ezaka nataon'i Beijing. Vokatr'izany dia nanaiky ny hanivana votoaty mitsikera ny governemanta shinoa izy ireo ary hampiroborobo ny hetsika manerantany ataon'i Beijing toy ny tetikasa One Belt, One Road. Nivoaka vao haingana ny porofo farany raha namoaka momba ny haben'ny fanivanana ataon'i Shina amin'ny fampitam-baovao, ny governemanta sy ny tontolon'ny ara-kolontsaina any amin'ny firenena maro ny mpiasa shinoa iray nifindra tany Aostralia.
Fikambanana iraisam-pirenena maro isan-karazany no manara-maso akaiky ny fitaomana Shinoa amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao ankehitriny, tahaka ny Sinopsis miorina any Prague, na ny Reporters Sans Frontières (RSF) any Paris izay namoaka tatitra antsoina hoe China’s Pursuit of a New Media World Order (Manenjika Lamina Vaovao amin'ny Fampitam-Baovao i Shina) tamin'ny volana Martsa 2019 izay mamaritra ny ezaka ataon'i Beijing amin'izany.
Cédric Alviani: Milaza ny foto-pinoana momba ny relativisma ara-kolontsaina fa manana zo fiandrianana hamaritra ny fepetrany manokana momba ny fahalalahana sy ny zon'olombelona ny firenena tsirairay. Manohitra mafy an'io fomba fijery io ny RSF satria mifanipaka amin'ny maha manerantany ny zon'olombelona araka ny voalaza ao amin'ny fanambarana maneran-tany momba ny zon'olombelona izany. Ny relativisma ara-kolotsaina no ahafahan'i Shina mamoaka taratasy fotsy, herinandro mialoha ny fankalazana ny faha-70 taonan'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina, izay mamintina fa lasa demaokrasia marina sy tompon-dakan'ny zon'olombelona izy, ​​sehatra roa izay matetika voatsikeran'ny fiarahamonina manerantany.
Fahazoana [fitantanana] fampitam-baovao. Manaraka fandaharan'asa lehibe amin'ny fividianana fampitam-baovao vahiny izay heveriny fa stratejika i Beijing. Ity politika fahazoana fampitam-baovao ity dia arindran'ny United Front Work Department (UFWD), sampan'ny Antoko Komonista manara-maso ny famindrana vola any amin'ny fampahalalam-baovao vahiny. Any Aostralia, izay ahitana fiarahamonina Shinoa fahatelo betsaka indrindra amin'ny tany Tandrefana, nolazaina i Beijing fa tafasovoka amin'ny 95% n'ny gazety amin'ny teny Shinoa.
Fanentanana atao dokambarotra. Mandray anjara amin'ny fanentanana ara-dokambarotra goavana i Shina amin'ny alàlan'ny fanampin-gazety propagandy “China Watch”. Zaraina ho sisika maimaim-poana ao amin'ireo gazety iraisam-pirenena malaza indrindra eo amin'ny 30 isa eo ity fanampin-dokambarotra ity, ka ao anatin'izany ny Daily Telegraph sy Le Figaro. Araka ny voalazan'ny the Guardian, nandray vola GBP 750.000 isantaona amin'ny famoahana ity sisika isam-bolana ity ny Daily Telegram.
Fanorisorenana sy Fandrahonana. Namolavola fitaovam-piadiana hanenjehana sy handrahonana ireo mpampita-vaovao vahiny ny fitondrana, ka anisan'izany ny fihainoina resaka an-tariby, ny fijirihana sy ny fanaraha-maso ara-batana, ary ao koa ny fametrahana anaty lisitra mainty amin'ny fangatahana visa.
CA: Ankoatra ny heriny malefaka, mampiasa betsaka ny “fahefany maranitra” ihany koa i Shina amin'ny alàlan'ny andiana fomba fanao mahery setra toy ny vaovao diso sy fanorisorenana. Tamin'ny volana Aogositra 2018, nanomboka nivezivezy ny tsaho fa tsy afaka mampiasa ny pasipaoron'izy ireo handehanana any ivelany intsony ny Taiwaney, ary nijery indray ny politika fanomezana visa maimaimpoana ho azy ireo ny Vondrona eoropeana. Tamin'ny 4 septambra 2018, rehefa nisy rivo-mahery nanery an'i Japana hanidy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Kansai nandritra ny roa andro, dia nisy tatitra niparitaka fa nilaozan'ny birao misolotena azy ireo ny Taiwaney tafahitsoka tao anatiny ka ny masoivoho shinoa no namonjy azy ireo. Niteraka hatezerana antserasera nihatra tamin'ilay diplaomaty Su Chii-cherng, 61 taona, izay solontenan'i Taiwan tany Osaka ny vaovao niparitaka tao Taiwan. Namono tena izy 10 andro taty aoriana. Hita fa vaovao hosoka avy any Shina taty aoriana ny tatitra tany am-boalohany.
CA: Ahafahan'i Beijing mamolavola fitantarana maneran-tany ho amin'ny tombontsoany ny “Tantarao tsara ny vaovaon'i Shina”: ohatra, amin'ny firesahana ny “ady amin'ny fampihorohoroana” any Xinjiang fa tsy ny fanenjehana ny vondrom-piarahamonina Uighur ao Xinjiang. Ny firaisankina Belt and Road News alliance (一帶 一路 新聞 合作 聯盟) tarihin'ny masoivohom-baovao Xinhua, ny TV CGTN ary ny China Radio International izay mivondrona amina media miisa 72 any amin'ny firenena 42 dia mampiofana ireo mpanao gazety amin'ny “singam-piteny” manokana ho an'ny tetikasa – amin'ny teny hafa, dia mba ahazoana ireo mpanao gazety ao amin'ireo firenena ho tafiditra amin'ny tetikasa “hitovy fiteny” amin'izay ampiasaina any Shina.